Kunoma lesigceme iyatholakala calcium gluconate. Kubuyekezwe udokotela usebenzisa lokhu izidakamizwa, uthi ngaphandle izidakamizwa hhayi kungaba ukwelapha izifo eziningi, ikakhulukazi labo lapho amangqamuzana omzimba ikakhulukazi kudingeka i-calcium.
Isidingo calcium ion umzimba
Calcium ingenye izenzakalo ezivelele adingekayo ukuze umsebenzi evamile yomzimba womuntu futhi butholakala cwaningo kuzo zonke izicubu. Gluconate, i-calcium chloride, - izixazululo zalezi nosawoti kukhona, mhlawumbe, ethandwa kakhulu ekwelapheni izimo ezisongela ukuphila elihlobene ne hypocalcaemia futhi hyperkalemia. izinkomba engeziwe zihlanganisa acute hypocalcemia ezinzima, ubuthi beta blocker noma ukuvimba ama-calcium channel.
Calcium kungenzeka parenterally yaphathwa ngendlela amafomu ezimbili ezihlukene: chloride futhi gluconate. Inikezwe avame calcium gluconate ngemithambo yegazi. Izibuyekezo zisikisela ukuthi ukwethulwa ubuncane ezifana ukungakhululeki kanye tolerability ezinhle. 10 ml isixazululo 10% equkethe 8.9 mg / ml calcium zokucathula. Ngokuphambene, ampule 10% i-calcium chloride inikeza kathathu njengoba emakamu eliphezulu-calcium zokucathula (27.2 mg / ml). Calcium chloride ingasatshenziswa ngemithambo yegazi kuphela ngoba kubangela izicubu necrosis emisebeni ngephutha ngaphansi kwesikhumba. Calcium gluconate (ukubuyekeza kwabasebenzi bezempilo kufanele ziqinisekiswe) - ukhetho oluncamelayo ezigulini ababuzwa ukuntengantenga hemodynamic. Nokho gluconate e isibindi akheka calcium ion bese uba bioavailable, ngakho-ke i hemodynamic noma simpofu kokusebenza kwesibindi engazinzile kungcono ukusebenzisa i-calcium chloride. Ngakho, uma kuboniswa ukuqokwa kwe-calcium gluconate, kungaba kuthathelwe indawo calcium chloride, kodwa sebenzisa kuphela-ingxenye eyodwa kwezintathu umthamo futhi khumbula ukuthi injongo calcium chloride kuyasiza uma ukufinyelela ezinhle emithambo yegazi nge isilawuli njalo ngesikhathi Ukufakwa.
Calcium gluconate - ekhuthaza calcium gluconic acid. Calcium kuyadzingeka ukusebeza kahle inhliziyo, imisipha, futhi izinhlelo sezinzwa. Isidingo ukuze kulandelwe imigudu efanele kumiswa amahlule e isicelo kusho "calcium gluconate". odokotela Kubuyekezwe ebonisa ukuthi izifo lapho amazinga aphezulu calcium ezidingekayo, ezifana hypocalcemia, tetany, izinqubo iguliswa futhi ukuvuvukala, ezinye izinhlobo elinobuthi, ngaphandle ukwelashwa kuyinto ayizwakali.
Calcium gluconate ngokuvamile esimisiwe udokotela uma kunezinkomba zokuthi. Esimweni ngasinye, umthamo is kushintshwe ngamunye.
Uma, ngesikhathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kwenzeka ukuwohloka liyadingeka ubuyekeze i-aphoyintimenti noma ukunciphisa umthamo zomuthi. Uma uthola inombolo enkulu iziguli imithi can ezihlukahlukene izinkinga.
Kukhona izifo ezihlukahlukene lapho ukusetshenziswa kwezidakamizwa "calcium gluconate". Imiyalelo, izibuyekezo odokotela abaningi bavumela ukwaba leqembu lezifo, imbangela eyinhloko okuyinto:
ukwandisa ulwelwesi permeability;
kokunikezwa kwe-ukuzwela Izinzwa amaza myocytes.
Imithi ulungisiswa lapho:
hypoparathyroidism (kwamathambo, tetany esicashile), iziyaluyalu umzimba, ikakhulu vitamin D: yamathambo (osteomalacia, spazmofilii), hyperphosphatemia in iziguli esingamahlalakhona kwezinso;
anda isidingo calcium ion: ngesikhathi sokukhulelwa, lactation nokukhula ngcono umzimba; singenele okuqukethwe calcium ukudla, umzimba walo ngenela (postmenopausal);
excretion sithuthukiswe-calcium ion, isibonelo, nokunwetshiwe embhedeni ukuphumula, ukucubuluza okungapheli, yesibili hypocalcaemia ukuphatha njalo isisu futhi antiepileptics, glucocorticosteroids;
Ushevu magnesium nosawoti, fluorine, acid oxalic nosawoti yalo;
ifomu hypercalcemic yokufa uhlangothi gqwa.
Ibonisa calcium gluconate for komzimba. Izibuyekezo ukukhombisa intuthuko okusheshayo isimo, ngoba kunciphisa permeability ka-capillary futhi kunciphisa puffiness. Le mpahla isetshenziswa ukwelapha purpura thrombocytopenic futhi dermatoses exudative ezifana dermatitis herpetiformis.
Isisebenzi sezempilo linqume izidakamizwa ngokucophelela okukhulu noma cha ukuba imnike, uma isiguli:
Kuyinto iguliswa impendulo ebucayi noma ubukisa yimiphi gluconate izithako calcium;
He is ixhegu;
Yena uhlushwa umdlavuza ukusakaza emathanjeni;
Anakho izinkinga inhliziyo;
ngesikhathi kuhlolwa wembula amazinga aphezulu calcium egazini, hypercalciuria nezinombolo eliphezulu vitamin D;
It has nesifo sezinso.
Calcium gluconate uqokwa ngokucophelela okukhulu noma alinikeziwe nhlobo ukuba izingane nentsha ezingaphansi kweminyaka engu-18.
Kwezokwelapha, kukhona umthetho ukuthi izidakamizwa kunikezwa kuphela uma zokwelapha luye lwabonisa ukuthi izinzuzo ngokuthatha izidakamizwa zinkulu izingozi. Eminye yale miphumela engemihle ingase ibe mibi kakhulu njengenkemba, nabanye kungase kubhekwe njengokwelapha isiphazamiso esincane.
Iziguli ezihlukahlukene ekuphenduleni imithi kuyahlukahluka. Kunzima ukuqagula ukuthi side effects wena ukuthatha imithi ethile, noma imiphumela emibi zonke izidakamizwa. Into esemqoka - kumele qiniseka ukuthi uyamtshela udokotela wakho ngezinguquko ezingabe zenziwe kabi.
Ukusabela Kwabo Lapho isidakamizwa kungenzeka ezimweni eziningi:
Ngemva umjovo emthanjeni kungabangela izinkinga uma engafanele iqondiswa calcium gluconate.
Ngokushesha ngemva umjovo isicanucanu, ukuhlanza, ukushisa komzimba, ukujuluka, umfutho ophansi wegazi, ukuluma, umuzwa wokuthanda ukucindezelwa noma ukushisa amagagasi, arrhythmias, i-calcium gluconate uma esethula ngokushesha. Kodwa kwezinye izimo, izinkinga kwegazi kungaba yingozi.
Kukhona izikhalazo mayelana emizweni ukunambitheka Cretaceous ngemva kokuphathwa "calcium gluconate -. Izitsha eziyisikhombisa" Izibuyekezo iziguli eziningi ukukhombisa enjalo engemihle.
Abstsedirovanie akuvamile waphawula ngemva ujove esicutshini.
Uma ungazizwa kahle noma kukhona ukukhathazeka mayelana imiphumela emibi, qiniseka ukuthi uyamtshela isisebenzi sezempilo.
Reception nezinye izidakamizwa
Uma uthatha imithi engaphezu kweyodwa, bakwazi ukuhlanganyela nomunye, okwandisa noma ukunciphisa ukusebenza ngomunye nomunye.
Isinqumo ukusebenzisa imithi uxhumana incike esimweni esithile. Ezimweni ezinjalo kubalulekile ukushintsha umthamo noma ukuqapha izidakamizwa eduze kakhudlwana.
Ekumisweni ukwelashwa kuyadingeka ukuze wazise udokotela amagama zonke imithi ozithathayo. Lokhu kuzothatha ku-akhawunti konke ukuhlanganyela. Lokhu kuhlanganisa wonke imithi okuye ebekwe yakho udokotela, udokotela wamazinyo, umhlengikazi, abahlengikazi ukusekelwa, umbelethisi noma wemithi. Unakho futhi ukusho mayelana nemithi ukuthi athengwe ekhemisi ngaphandle kadokotela.
Uma uphuza calcium gluconate, futhi omunye izidakamizwa ngenhla noma izinhlobo izidakamizwa, qiniseka udokotela wakho uyazi ngakho.
Bonisa ukungavumelani zomuthi "calcium gluconate" ukubuyekezwa. Tablets noma isixazululo komjovo ayikwazi kuhlangene carbonates, salicylates, sulfate. Lokhu kufakazelwa umkhuba enkulu yalesi izidakamizwa. Ukwakheka izakhiwo kanye tetracycline kunciphisa umphumela elwa namagciwane lakamuva. Ekwelapheni digitalis amalungiselelo ekuphathweni parenteral-calcium gluconate ayiboniswa ngenxa lenyuka anobuthi umphumela glycosides. Calcium gluconate futhi isisu thiazide ingase ithuthukise hypercalcemia. Yehlisa umphumela calcitonin nge hypercalcemia kanye bioavailability of phenytoin uma kusetshenziselwa ndawonye nale izidakamizwa.
ukuthaka imithi enjalo njengoba ceftriaxone, blocker-calcium channel, glycosides inhliziyo isisu thiazide, hhayi kuhlangene ukulungiswa "calcium gluconate", njengoba kuba nomphumela ukunciphisa uxhumana izidakamizwa.
nemithi ongumphelelisi namavithamini
Calcium gluconate is kuhlangene izidakamizwa aphelele kanye amavithamini. Ngokuvamile, akukho ulwazi oluningi olutholakalayo mayelana nokuxhumana kwabo. Uma uya ukuthatha noma zithatha kakade oyiphuzayo namavithamini kufanele ucele udokotela wakho mayelana nokuba khona imiphumela eyaziwa lapho kuhlangene i-calcium gluconate.
Izidakamizwa baphinde baxhumane eziningi izakhi. Kwezinye izimo, kungase kube yingozi, futhi udokotela angase ukweluleka unamathele ukudla othize.
Endabeni calcium gluconate bangamukeli ukudla ethize ukuthi kufanele ukuwakhipha kusuka ekudleni kwakho. Futhi ngisho utshwala ngeke kuthinte kusebenta izidakamizwa.
ukuhlela umndeni kanye nokukhulelwa
Imithi eminingi kungathinta kwengane esibelethweni. Lapho ethola calcium gluconate akudingekile ukuzithiba medicate. Umuthi kungenziwa kuphela khona ngudokotela wakho.
Uzodinga ukuxoxa nesimo nodokotela wakho ukuze nesisindo izingozi jikelele nezinzuzo kokuthatha lesi imithi. Wena kanye nodokotela wakho iyonquma ukuthi ngabe uyokwazi yini wena ukuthatha leli imithi ngesikhathi sokukhulelwa.
Uma isinqumo siwukuthi awuzwani kufanele usebenzise i-calcium gluconate, kufanele uxoxe ukuthi kukhona imithi ehlukile ukuthi ingase ikhishwe ngesikhathi sokukhulelwa.
Lo muthi ludlulele ngaphakathi ubisi lwebele, ngakho nabancelisayo kumele ube nesisindo izingozi nezinzuzo aphoyintimenti enjalo.
udokotela wakho kuphela anqume ku sekufanele awushiye ekulungisweni "calcium gluconate" izingane. Izibuyekezo nodokotela bezingane sihambisana isikhundla ukuthi seziguli ezisencane izidakamizwa kwamukeleka kahle.
I kungenzeka ukwethulwa izidakamizwa "calcium gluconate" - intramuscularly. Uphenyo odokotela abaningi bathi indlela iphephile, lokhu kuhambisana nomphumela owaqhubeka isikhathi eside zomuthi. umjovo i-intravenous isetshenziselwa izimo sibi noma kuzuzwe nomphumela okusheshayo. Le ndlela kuyinto ekahle izingane ngaphansi kohlelo kosuku 2-3 ne usuku break 1-5 ml. V / m yethulwa abantu abadala kuphela nsuku zonke noma okufanayo scheme Yiqiniso ngakanye: izinsuku ezingu-2-3 reception - 1 usuku ikhefu - ezinsukwini ezingu-2-3 yokuphathwa.
Tablets zithathwa izikhathi 2 noma 3 ngosuku 1-3 g (amaphilisi 2-6) ngaphandle ukuxuba ngokudla nangokwenama ukuphuza ubisi efiselekayo.
Kunezindlela eziningana izinkomba ngoba ukusetshenziswa kwezimali "calcium gluconate". Kubuyekezwe udokotela noma wezingane lingahunyushwa baphetha ukuthi injongo imithi nsuku - iyona ukuzinza, ukuphepha nokusebenza ngempumelelo. Kuphela nalo mbono ubonisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
"Laktogel": imfundo manual, ukubuyekezwa kanye analogue
Umuthi 'Cinnabsin ": ukubuyekezwa, analogue, intengo, yokusetshenziswa
Kraurosis ngemomozi: izimpawu, impatho uphethwe
Iminikelo evumayo "Rosselkhozbank": izici nemibandela ukuvulwa
Kungani baphupha ingane encane? Okufanele ukulindele?
Calorie uphayinaphu omisiwe: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Indlela yokwenza bead izinkuni - wisteria omangalisayo.